यी सुन्दरी युवतीले देशै छोड्नु पर्यो ? कारण थाहा पाउदा तपाई पनि अचम्ममा पर्नु हुनेछ ! – Khabar Patrika Np
यी सुन्दरी युवतीले देशै छोड्नु पर्यो ? कारण थाहा पाउदा तपाई पनि अचम्ममा पर्नु हुनेछ !
प्रकाशित मिति: शनिबार, आषाढ २६, २०७८ समय: १७:३६:१३